Nezve Isu - Feilifu Technology Co., Ltd.
Feilifu Technology Co., Ltd yakavambwa muna Sep. 2010, ine vashandi vanopfuura mazana matatu, kusanganisira vanopfuura makumi matatu mainjiniya. Kambani inotarisa pakuvandudza, kugadzira uye kutengesa kwepasi socket, tafura socket, IP55 & IP66 mvura isingapindi chinja & zvigadziko & IP66 isina mvura yepurasitiki yakavharirwa.
Kambani yaimbozivikanwa seZhejiang Hent Electrical Co., Ltd, yakavambwa muna 1998. Zvese zvigadzirwa zvakapfuura 3C certificate & ISO9001:2008 quality management system, ISO14001:2004 environment management system uye OHSAS18001:2007 occupational health and safety management system in indasitiri.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya muzvivako zvehofisi, horo dzekuratidzira, nhandare dzendege, mabhangi, ect. Zvigadzirwa zvedu zviri kutengeswa kuEurope, America, Middle East, Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu. Kusvika parizvino, tine anopfuura makumi mapfumbamwe emhando dzeOEM.
Kugamuchirwa kushanyira fekitori yedu & kushandira pamwe nesu takabatana!